gaani89 | Just another WordPress.com site
Juunyo 26, 2014
Kooxda Liverpool ee dalka ingiriiska ayaa ku dhaw inay heshiis lagaarto laacib ka kooxda Bayern Munich iyo xulka Switzerland Xherdan Shaqiri.
Sky Italia ayaa sheegaysa in kooxda Liverpool oo inbadan daba joogtay 22 jir kaan Xherdan Shaqiri ay ugu danbayntii ku dhawdahay inay soo gaba gabayso saxiixiisa.
Di Marzio oo ah wariyaha qoray warkaan ayaa intaa ku daray in wakiilka Shaqiri oo ah walaakiis uu wada xaajood ku aadan shuruudaha gaar ka ah ee laacib ka uu kula jiro kooxda Liverpool ee dalka ingiriiska.
Xherdan Shaqiri ayaa xalay si wayn uga qayb qaatay in xulkiisa qaranka Switzerland uu u soo baxo wareega 16-ka koobka adduunka kadib markii uu u dhaliyay 3leey.
Laacibka xulka qaranka Uruguay iyo kooxda Liverpool Luis Suarez ayaa ka hadlay dhacdadii aadka loola yaabay ee uu ku sameeyay daafaca kooxda Juventus iyo xulka talyaaniga Giorgio Chiellini.
Suarez oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga wadan kiisa Uruguay ayaa wax laga waydiiyay dhacdadii isaga iyo Giorgio Chiellini wuxuuna ku jawaabay:
“Waxaas waa wax mar walba ka dhex dhaca garoonka, waxaan kuwada sugnayn xerada ganaaxa, garab kiisa ayuu iiga dhuftay xabad ka sidoo kale isha ayuu iiga dhiftay, waxaasna ma ahan wax haboon in lasii raac raaco waana wax intabadan ka dhaca garoomada”.
Suarez oo ka hadlay ciyaarta ayaa yiri “Aad ayaan ugu faraxsanahay soobixitaan keena waana ogayan inay lagama maarmaan tahay inaan guulaysano si aan ugu soo gudubno wareega xiga, waqtigaan la joogo waan garanaynaa awoodeena iyo meesha aan awoodno inaan gaarno”.